Nokuva Jumbo nhengo iwe uchatsigira Rikoooo uye unakidzwe nemhando dzinotevera
Kunonyanyisa kudhanilodha akurumidze kusvika 4000 KB / s = 4 maminitsi por GB!
Kusvikira ku 12 Zvinyorwa zvakasiyana-siyana / zvakafanana kana 12 connnexions neIndaneti = (4000 KB / sx 12)
Hapana kushambadzira kupi zvako panzvimbo yepaiti, yakachena uye yakasununguka kufamba
Access kune vamwe kuwedzera-wanda uye Goodies akasikwa Rikoooo
Direct Download kubva yebhuruu 'Download' bhatani
Nei chikwata cheJumbo chiripo? Kutumira zvinyorwa kune vanosvika mazana zana evashandisi zvinosanganisira zvakakosha mari. Izvo mari haigoni kuvharwa chete nekutengesa. Zvisinei, neurongwa hweJumbo iwe unogona kubatsira chaizvo kuchengeta Rikoooo.com paIndaneti. Nhengo ndeyechokwadi, iwe unogona kusununguka pakusunungura mafaira ose pane zvishoma.
* Kushandisa kupera kunopesana zvichienderana neInternet connection uye nguva
Haikwanise kuisa zvigadzirwa zvetiyoti.